The I-TinderBox uhlelo lokusebenza lumnandi futhi lungisindisile amahora ngamahora wesikhathi. Ngokuyisisekelo, ngithuthukise indawo yokugcina okuqukethwe nayo yonke imikhiqizo neminikelo yesevisi esiyinikezayo. Njengokulindelwe okucela isiphakamiso, noma yiliphi ithimba lethu lingangena lingene libambe izigaba esizidingayo, lishicilele isiphakamiso, lilinde ukwaziswa ukuthi lelo thuba lisibukile, liphendule noma imiphi imibuzo… futhi lithole ukwamukelwa. Anginakungabaza ukuthi isoftware uqobo isize ukuvala amadili athile.
Inkampani iyaqhubeka nokwengeza izici ezinhle nokusebenza - kufaka phakathi izexwayiso ze-SMS, Ukugcinwa Kwesiphakamiso, Isifanekiso Sokulinganisa (bekukuvuseleleni kwethu kwakamuva… nokuthile esizokusebenzisa ngokunenzuzo), nokufaka isihloko ngokugcwele. Iziphakamiso zethu zibukeka zimnandi futhi singafaka namavidiyo kuzo: